Randrianarijaona Antsanarindra, Andrianjakanavalona Finaritra, Razafimahaleo Luc, Rakotondrasoa Mihaja, Andrianarivony Soaranto ary Rakotoarimanana Maminiaina. Manaraka ny lalam-piofanana « Comportement du manager » izy ireo ka anisan’ny hianarana amin’izany ny famolavolana sy fanatanterahana tetikasa ara-tsosialy. Nisafidy toerana iray dia ny fokontany Madiomanana Fenoarivo izy 7 mianadahy ary ny resaka rano fisotro madio no nanaovany tetikasa noho ny tsy mbola fisian’ny ranon’ny Jirama eny an-toerana. Toeram-patsakana efa tamin’ny andro fahagola ary efa maloto no fampiasan’ny mponina ka nanampy azy ireo tamin’ny famatsiana rano fisotro madio ireto mpianatra ireto. Tontosa ny fanamby ka nahavitana ny lavadrano novolena paompy eo amboniny, izay notokanana ny 5 novambra. Ny fihetsika sy ny fikarohana toy izao no tsy ampy amin’ny tanora eto amintsika ary tokony hotohanana sy hampirisihana ny rehetra hanana fandavantena.